MAQAL:Faroole”Shabaab badda & bariga ayay ka soo galayaan Puntland”(DHAGEYSO) – SBC
MAQAL:Faroole”Shabaab badda & bariga ayay ka soo galayaan Puntland”(DHAGEYSO)
Posted by editor on Apriil 11, 2012 Comments
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa sheegay in Saraakiisha Shabaab iyo dagaalyahanadooda ay isticmaalayaan Badda iyo Bariga si ay u soo gaaraan deegaanada Puntland.
Isagoo wareysi siinayay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa Faroole waxaa uu sheegay inay mudooyinkii u dambeeyay ka war hayeen qul qulka ragg ka tirsan Shabaab, isagoo xusay in tan iyo bishii Agosto ee sanadkii hore ay Al-Shabaab ku soo qul quleysay deegaanada Puntland, waxaana uu sheegay in arinkaasi shirar caalami ah kuwa local ah intaba ka sheegeen.
“Ilaa bishii Agosto Xamar inteeda badan markii laga saaray waxay damacsanaayeen oo ay go’aan ku gaareen inay u soo guuraan waqooyiga Somalia inta u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ee Buuraha Golis, si ay xiriir ula sameeyaan Al-qaacidada gacanka cadan”ayuu yiri Madaxweyne C/raxmaan Faroole.
Faroole ayaa sheegay maalin ka hor dooni kuwa Yemen lagu sameeyo ay ku soo xiratay Xeebta Laas-Qoray, halkaasoo uu sheegay in Ragg saarnaa ka soo degeen, deetana raashin ku karsadeen, kadibna ka tagay guubta isagoo sheegay inaanay war u hayn halka ay aadeen ragaasi.
“Badanaa markii laga soo adkaaday ee Ciidamada dalalka deriska soo galeen waxay dooni kuwa Yemen lagu sameeyay oo calaamad gaar ah wadatay inay ku soo galeen Xeebta Laas-Qoray, waxay ka soo tageen Baraawe iyo Marka, qaar baan doonidii ku noqday meel ay aadeen lama yaqaan”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
C/raxmaan ayaa sidoo kale sheegay inay ku jiraan saraakiil deegaanada Puntland u dhalatay oo soo gaartay, isagoo tilmaamay inay soo mareen deegaano deris ah oo aanay cidi joogin, isagoo xusey inay dagaalkii ay kula jireen kooxahaasi halkiisii ka sii wadi doonan inkastoo loo baahan yahay taageero Puntland laga siiyo arinkaasi.
“Qaar waxay qabteen galbeedka Laas-Qoray oo ay Golis ka sii galeen, waxaa kaloo jira in meelihii laga qabsaday sida Ceelbuur oo kale inay ka soo tageen, nimankii madaxda ahaa ay Cadaado iyo Gelinsoor soo mareen, meel Gobolka Soomaalida Itoobiya bari ka ah ay ka soo dhaceen, ilaa Ceyn, Buuhoodle, deegaan u dhaxeeya Burco iyo Laascaanood aanay cidi joogin”ayuu yiri C/raxmaan Faroole.
Waxaa uu sheegay in degmada Laascaano lagu arkay Kuxigeenka Amiirka Al-Shabaab ee dhinaca Amniyaadka, isagoo xusay in lagu wargeliyay, balse ay waayeen cid ka gacan siisa soo qabashadiisa sida uu yiri.
Faroole ayaa intaa ku daray inay jiraan dad badan oo Shabaab ka tirsan oo lagu qabtay wadada Laamiga ee u dhaxeeya Garowe iyo Galkacyo, isla markaana wadada ay furan tahay, qaarkoodna ay lug ku marayaan deegaanada.
Mar la weydiiyay in hadalkiisa inuu ku raadsanayo taageero Caalami ah iyo in kale ayuu sheegay in Gobolada Puntland ay musiibo hor leh u soo wareegeen, isagoo tilmaamay inay xaq u leeyihiin kaalmada milateri ee Koonfurta Soomaaliya la siiyo inay Puntland hesho.
Wareysiga Madaxweynaha oo dhameystiran link-ga audio hoose ka dhageyso.